Hisokatra Ao Rosia Ny Foibe Fanarahamaso ny Propagandy sy ny Fandisoam-Baovao Ato amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Marsa 2016 4:48 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, English, Български, English
Nilaza tamin'ny fampahalalam-baovao Vedomosti i Kasperskaya fa anisan'ny valin'ny soso-kevitra avy amin'i Putin mba hanosika haingana ny fiarovam-baovao ny foibe. Efa manana sampan-draharaha miasa amin'ny fanoherana sy famaliana ireo fanafihana an-tserasera i Rosia, hoy izy, saingy mamerimberina izy fa ny fikambanany no ho voalohany amin'izany karazany izany, dia ny fanaraha-maso sy fisorohana ny fanafihanam-baovao amin'ny aterineto.
Mieritreritra ireo mpiara-miasa fa hanaramaso ny habaka mampiasa ny teknolojia novokarin'i Kribrum- tetikasa hafa iarahan'i Kasperskaya sy Ashmanov ny foibe. Afaka mikiky votoaty an-tserasera sy manadihady izany ho an'ny fihetseham-po sy ny fiotanam-po ny fanadihadiana media sosialy ataon'ny Kribrum sy ny lazany amin'ny fitantanana ny rindrambaiko . Nilaza i Ashmanov fa efa ampy lenta ny fahaizamanaony ahafahana mamantatra mialoha izay fanafiham-baovao antserasera raha vao manomboka izany, sy ny mamantatra ireo mpikarakara izany. Ny ankamaroan'ny ezaka fanarahamaso dia azo inoana fa hikendry ireo tambajotra sosialy sy ny tontolon'ny bilaogy Rosiana, izay mavitrika indrindra ny “fanosoram-potaka” anaty adihevitra ara-politika sy ara-panoharana .
Nitatitra ny Fikambanana iray tsy miankina mpiaro ny zon'olombelona Rosiana Agora fa na dia mijanona ho fitaovana lehibe amin'ny politikan'ny aterineto Rosiana aza ny fanivanana sy fanakànana votoaty, dia heverina fa tsy mahomby loatra izany noho ny sivana marobe isan-karazany ataon'ny tsirairay.
Eoropa Afovoany & Atsinanana09 Novambra 2021